မွေးနေ့ ဆုတောင်းကို တကူးတကနံရံပေါ်အထိလာရေးထိုးပေးကြတဲ့၊ SMS တွေ ပို့ ဖုန်းတွေဆက်ပြီး ဆုတောင်း ပေးကြတဲ့ မိတ်ဆွေ မောင်နှမ ညီအစ်မ သူငယ်ချင်း တူတူမ အား.လုံး လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင် မိပါကြောင်း ရင်ထဲ စိတ်ထဲမှာ အနက်ရှိုင်းဆုံးမှတ်တမ်းတင်ထား လိုက်မိပါတယ်။
တကယ့်ကို ကြည်နူးစရာ နွေးထွေးနူးညံ့တဲ့ ဆက်သွယ်မှုလေးတစ်ခုပါပဲ ၊မမြင်မတွေ့နိုင် တဲ့ အရပ်က မေတ္တာတွေ စီးဆင်း ၀င်ရောက်လာပုံက ဆန်းကျယ်သလောက်သိမ်မွေ့လွန်းပါတယ်။
ချစ်ခင်ရတဲ့ မမြင်မတွေ့ဖူးသော မြင်တွေ့ဖူးသော မိတ်ဆွေ သင်္ဂဟအားလုံး နှစ်သစ်မှာ
""" စိတ်နဲ့ကိုယ်တစ်ထပ်တည်းကျလို့ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့နိုင်ကြပါစေ.။"""
မမ ပေးတဲ့ လက်ဆောင်ပါ ၂၀၁၀ မှာ အဲလို ထပ်တူထပ်မျှ ခံစားမိခဲ့ရပါတယ်..။ မမရေ...အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်.။
ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ပြန်မြင်ကြည့်လိုက်တော့ မျက်ရည်စက်လက်နဲ့ ကြည့်လို့မကောင်းဘူး
သုံးချက်ခေါက်လိုက်တဲ့ တုံးမောင်းသံက ခေတ်ဟောင်းအဖြူအမည်းကား နည်းနည်းဆန်တယ်
အဲဒီ ၂၀၁၀ တေးသွားက အဆုံးမှာတောင် မလိုအပ်ပဲ တယောသံခပ်များများနဲ့ .. အီဆွဲနေလိုက်တာ
ပြုတ်ကျအောင် ဖြုတ်မချနိုင်ခဲ့တဲ့ အဲဒီ ဂီတက ရင်နင့်မကျန်ခဲ့တာ ဆန်းသလား ………..
ဒီမှာ ..ကျွန်မက အစွန်းနည်းနည်းရောက်ပြီး .. အဲဒီအစွန်းက ချောက်ကမ်းပါး နည်းနည်း ဆန်တယ် ..
လေနည်းနည်းထန်ပြီး .. အန္တရယ်တွေကိုလည်း ဟန်ကျပန်ကျ ချစ်တတ်တယ် … ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်
ကိုယ့်အတွက် တိတိပပညွှန်းထားတဲ့ ဇာတ်ညွှန်းကျကာမှ စကားလုံးတွေကလာကျွမ်းနေတာ မခက်ဘူးလား
ကတ် …. ကနဲ ဖြတ်ချလိုက်ရမယ့် ဒါရိုက်တာ .. ခင်ဗျား ဘယ်ရောက်နေပြန်တာလဲ …
တစ်နေ့တစ်နေ့ ကောင်းကင်ဆန်ပြရတာ မောပန်းပြာနှမ်း လာတယ် ( မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းတွေမှာက လူတွေအပြည့်နဲ့ )
မြေပေါ်မှာ လဲလျောင်းခွင့်ရနေရင် ဒိထက်ပို ပြုတ်ကျစရာ ဒါဏ်ရာရစရာ ဘယ်မှာရှိတော့မလဲ …
သာသာယာယာရှိနေတဲ့ မြစ်ကမ်းအရောက်မှာမှ ကမ်းပါးထိပ်က ခုန်ချပစ်လိုက်ရတဲ့ ဇာတ်ညွှန်း ..
တဆိတ်တော့ .. လွန်လွန်းနေပြီ …ထင်တယ်
ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် မှတ်လောက်သားလောက်အောင် ဒါဏ်ခတ်မှ ဖြစ်တော့မယ်
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆုံးမရတာ ဘယ်လောက်ခက်ခဲပင်ပမ်းတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားလည်း သိတာပဲ ..
ကိုယ့်ခေါင်းကိုယ် ဘယ်အတိုင်းအတာထိ မာရေကြောရေ ရှိတယ် ဆိုတာလည်း ကိုယ်တိုင်ပဲသိတာ..
ကိုယ့်နားထင် ကိုယ်သေနတ်နဲ့ ထောက်ပြီးကာမှ ပစ်ရခက်နေတတ်တာကလည်း သဘာဝပဲမဟုတ်လား …
တကယ်ဆို အဲဒီလို ပြန်မြင်ကြည့်ဖို့ မရည်ရွယ်ပါဘူး … ကိုယ့်ဇာတ်ရုပ်လည်း ကိုယ်သိနေလျက်နဲ့ အပိုတွေ ..
ကျိမ်စာတွေ ဗလုံးဗထွေးနဲ့ ဝေးပြီးရင်း ဝေးနေရတဲ့ နံနက်ခင်းတွေက အဓိက ဇာတ်ကွက်လို ထပ်ထပ်လာ
ခုကျမှတော့ ဆေးစပ်လည်းမှား အရောင်လည်း မမှန်တဲ့အကြောင်း ဘာကြောင့်ချူပ်ကြောင်းထပ်ပြောနေမလဲ
အဲဒီလို လွင့်မျောရမယ်မှန်းသိရင် အစတည်းက မိုးတိမ်တစ်ခုအဖြစ်ပဲ ရွာချပစ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့လိုက်ပါတယ် ..
at 8:35 AM3comments:
Labels: အမှတ်တရ ကဗျာ
ကျွန်တော်တို့ စိမ်းကားစရာ မလိုတော့ဘူး
အဖြူရောင် သက်တံဟာ ဆက်လက်ထွန်းခဲ့ပြီ
ကျွန်မတို့ စိမ်းကားစရာ မလိုတော့ဘူး
ငိုကြွေးတယ်ဆိုတာ လူသားတွေရဲ့ အရှုံးခံအလုပ်သက်သက်မဟုတ်ကြောင်း
သက်သေပြဖို့ အဖြူရောင်သက်တံကို ကောင်းကင်မှာ ချိတ်ဆွဲခဲ့ပြီ
လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပေါင်း ၄၀၀ က သက်တံဟာ ပြောခဲ့တယ်
လူတို့ ကြယ်တို့ ကလေးတို့ လင်းလက်ဖို့
ဘ၀ဟာ ကိုယ့်အတ္တအတွက် သက်သက်
ချစ်ဖို့ မဟုတ်တဲ့ အကြောင်း
လူဟာ ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အမြင် မှန်ကန်ကြောင်း
စနစ်တကျ စီထားတဲ့ ၀ါကျတွေထက်
နွေးထွေးတဲ့ လက်ဖ၀ါးတစ်စုံ လိုအပ်တဲ့အကြောင်း
လောကမှာ ဘယ်ပုံဘယ်နည်း နေထိုင်ပါလို့
မာသာထရီ က မှာမသွားဘူး
ဘယ်လို ပေးဆပ်ရမယ် ဆိုတာပဲ ပြသသွားခဲ့တယ်
လူတွေကို ဘယ်လိုရက်ရက်စက်စက် မုန်းတီးရမယ်လို့
မဲလ်ကွန်အိတ်စ် က လှုံ့ဆော်မသွားဘူး
ဘယ်လိုချစ်ရမယ် ဆိုတာပဲ သင်ကြားခဲ့တယ်
ဒီလိုနဲ့ ခံနိုင်သမျှ ၀န်ကို သယ်ပိုးရင်း
သက်တံ တစ်စင်းရဲ့ ရေးထွင်းခြင်းခံရသူတွေဟာ
ဒီလိုနဲ့ မေသက်နွယ်ကို ဒုက္ခတောထဲက ဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီ
ဒီလိုနဲ့ မြနဒီလည်း ရယ်စရာမောစရာတွေ ပြောနိုင်ခဲ့ပြီ
လောကရဲ့ နှလုံးသားကို ပွင့်ဝေစေတဲ့ ဂီတတစ်ခု
လူ့ဖြစ်အင်ကို ပြန်သတိရစေတဲ့ စေ့ဆော်မှုတစ်ခု
လောကကို ချစ်ဖို့ အခွင့်ရေးတစ်ခု
လူ့အဖွဲ့စည်းရဲ့ ထွန်းကားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခု
သောကတွေ ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေ စွန့်ပစ်ပြီ
မေတ္တာတရားကို ရင်ဘတ်နဲ့ ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးဖို့
အပြစ်မဲ့ ရင်ခွင်တွေဆီ အကြင်နာ မျိုးစေ့ကြဲဖို့
ဘ၀ဆိုတာ ဓါးတစ်လက်ရဲ့ အရောင်လို
ဘယ်နေပူပူ ဘယ်မိုးရွာရွာ လာသွားစို့
(ဒီကဗျာလေးက အဖြူရောင်သက်တံ ကဗျာရွတ်ဆိုပွဲမှာ အဖွင့်ကဗျာ အနေနဲ့ ရွတ်ဆိုသွားတဲ့ ကဗျာလေးပါ
ဆရာ ဇော်သက်ထွေး ရေးသားပြီး
ကိုရီဝေရံ နဲ့ မချောအိအိသိန်းတို့ က ရွတ်ဆိုခဲ့ကြတာပါ)
ရွက်ကြမ်းရေကြိုလေးတောင် နှင်းမပါတော့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ အ၀ါတွေ
စိတ်ဆန့်ရာ ခရီးအတိုင်း လိုက်လံ အုံ့ ပြာနေတတ်သော ကိုယ်ထူကိုယ်ထဒဏ်ရာများ
သိပ်မောလွန်းလို့ ဒီဇင်ဘာကို သွားလိုရာ သွားခွင့်ပြုလိုက်မိတဲ့ အထိ
အိပ်မက်တွေကို အလန့်တကြား လွှတ်ချမိခဲ့တယ်..
ဒီရာသီမှာ ဘာပန်းတွေ ပွင့်တတ်သလဲတောင်မေ့လျော့
ဒီရာသီမှာ လေပြည်တွေ စွာစွာရိုင်းရိုင်းရှိနေတတ်ခဲ့သေးသလား
ဒီရာသီမှာ အစိမ်းရောင်တွေ တဝေါဝေါ စီးဆင်းနေခဲ့တာကတော့ သေချာတယ်
ဒီဇင်ဘာ ပစ်ချလိုက်တဲ့ လက်ဆောင်ထုပ်က အနီရင့်ရောင်ပါ
ဒီလက်ဆောင်ထုပ်ထဲက မရေမတွက်နိုင်သော နောက်ထပ်လက်ဆောင်များ
မှန်းဆရင်ခုန်ခြင်းဆိုတာ ဘ၀ကို ခပ်ဆတ်ဆတ် မောင်းနှင်နေတဲ့အရာတွေပါတဲ့..
ဘယ်တော့များ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မိမှာတဲ့လဲ
တကယ်ဆို ခေါင်းလောင်းသံတွေ ချိုလွင်သာယာယုံလောက်ပါ
တကယ်ဆို ကိုယ့်ကောင်းကင် ကြည်ပြာလင်းလဲ့ယုံလောက်ပါ
တကယ်ဆို ကိုယ့်ဥယျာဉ် နှင်းဆီဖူးပွင့်ယုံလောက်ပါ..
ညိုမှောင်ခြောက်သွေ့ တကိုယ်ရည် စာအုပ်ထဲ
ဒီဇင်ဘာကို စောင့်နေခဲ့တဲ့ ပန်းချီအကြောင်း
ကိုယ်တိုင် ကောက်ကြောင်း ဆွဲထားမိခဲ့ပေါ့။ ။
အစ်မ မနော်ဟရီရဲ့ ဒီဇင်ဘာကို စောင့်နေခဲ့ဖူးတယ် ကဗျာလေးဆီကနေ စီးဆင်းလာခဲ့တဲ့ ခံစားချက်သက်သက် ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါ။
မမ မွေးနေ့အတွက် အမှတ်တရလေးအဖြစ်ပေါ့ ။
( ချစ်သော အစ်မ မနော်ဟရီ အတွက် အကောင်းဆုံးဆိုသော ဆုမွန်များစွာဖြင့်..)
ဒီနှစ် မိတ်ဆွေ ညီအကိုမောင်နှမတွေ စုပေါင်းပြီး လှူဒါန်းကြမယ့် အလှူဒါနပွဲလေးအတွက် ဒီဇင်ဘာ(၁)ရက်နေ့ကနေ ဒီဇင်ဘာ(၁၁)ရက်နေ့ ဒီနေ့အထိ ကောက်ခံရရှိထားတဲ့ ငွေတွေကို
သုခရိပ်မြုံနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ သတင်းအချက်အသေးစိတ်လေးတွေကို အောက်မှာဖေါ်ပြပေးထားတဲ့ Link လေးတွေမှတဆင့် ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ကြောင်းလည်း ထပ်မံ သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်။
အလှူငွေတွေကို နိုင်ငံအလိုက် ဖေါ်ပြပေးထားပါတယ်
ရရှိတဲ့ငွေများကို နိုင်ငံအလိုက် ငွေပေါက်ဈေးများအတိုင်း ဖေဖေါ်ဝါရီလမှာ သုခရိပ်မြုံအပြင် HIV နဲ့ပတ်သက်တဲ့
ဆေးရုံ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ ကိုပါ လှူဒါန်းသွားကြဖို့ ရည်ရွယ်ထားကြပါတယ်.။
နိုင်ငံအလိုက်ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုလည်း ထပ်မံဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်..။
ဖတ်ရှုနိုင်တဲ့ LINK လေးတွေကတော့
၁.၁၂.၂၀၁၀ မှ ၁၁.၁၂.၂၀၁၀ အထိလက်ခံရရှိပြီးသော အလှူငွေစာရင်း
အိန္ဒြာ ( ၉၁၇၉၆၅၄၂)
မိုးကုတ်သား( ဘိုဘိုဟန်ထွန်းနိုင်) (၈၁၁၈၉၁၆၀)
၁)ကိုဝင်းဇော်လှိုင် အိန္ဒြာ S$ ၁၅၀
၇)ပန်ဒိုရီ ပန်ဒိုရာ S$၅၀
၂၄)ကိုထွဋ်တင်အုန်း+ မအေးစန္ဒာS$ ၅
၃၃) ဆရာမ မနော်ဟရီ နှင့် သားများ Zephyr ၊ ခေတ်နေS$၁၀၀
၃၄)Zephyr နှင့် ရည်မွန်S$၁၀၀
အလှူရှင်(၃၄)ဦးထံမှ အလှူငွေ စင်ကာပူဒေါ်လာ ( ၁၅၄၂)ရရှိထားပါတယ်.။
သင်းသင်းထွဋ် (၀၈၀ ၄၁၁၃ ၁၈၇၅)
ခင်လေးငယ် (၀၈၀ ၂၀၃၂ ၇၁၄၈﻿ )
၅)အမည်မဖော်လိုသူ စေနာရှင် ￥၅၀၀၀
၇)ကိုပြည့်စုံ+မတင်တင်မိုး သမီး ထက်နန္ဒာ။သား သုခပြည့်စုံ ￥၂၀၀၀
၉)ဦးမြသောင်း+ဒေါ်ယဉ်ယဉ်မြင့် မိသားစု ပဲခူး ￥၅၀၀၀
၁၀)ဦးမျိုးမြင့်+ဒေါ်ဘေဘီနွဲ့ မိသားစု ￥၁၀၀၀၀
၁၆)ရဲထွဋ်စိုး ￥ ၅၀၀၀
၂၂)ဖြူ ဖြူကြွယ် ￥၃၀၀၀
၂၅)ကိုဝင်းသိန်းထွဋ်+မတင်ဌေးလှိုင် သမီး မိုမိုချန် ￥၂၀၀၀
အလှူရှင်(၂၈)ဦးထံမှ အလှူငွေ ဂျပန်ယန်း ( ၁၀၂၀၀၀)ရရှိထားပါတယ်.။
A Shin Kondala
Univerisy of Jammu
Nehru Hall Boys Hostel
Room- 144, Jammu-180006,Jammu&Kishmir,India,
Phone- No +91 9697510037
၂)ဒေါ်ခင်မမ မိသားစု (ရွှေမန်းမေ အထည်ဆိုင်) RS ၅၀၀
၃)မဖြူစင် - ( ရန်ကုန်)၁၀၀၀၀Kyats.
၄ )ဆရာတော် ဦးဇောတိဿရ- (ပုသိမ်)၁၀၀၀၀ Kyats
၅ )ဆရာတော် ဦးကုဏ္ဍလ- (ကျောင်းကုန်း) ၁၀၀၀၀ Kyats.
၆)မောင်မင်းမင်းစိုး မိသားစု- ( တောင်ငူ) ၅၀၀၀Kyats
စာပေချစ်မြတ်နိုးသူများ ( ၀၁၀ ၂၂၆၉၁၇၈၈)
Yမြစ်ချို (၀၁၀ ၈၇၁၄၇၀၁၉)
၁)ကိုရီးယားနိုင်ငံစာပေချစ်မြတ်နိုးသူများ မြန်မာငွေကျပ် ၂၀၀၀၀၀
ခရေတွန်(၆၀ ၁၆၆၀၄၀၄၀၀) craton1990@gmail.com
မိုးမမလွင်(၆၀ ၁၂၂၀ ၁၄၇၃၃)
၁) မိုးမမလွင် မလေးရင်းဂစ် RM၁၀၀
မြစ်ကျိုးအင်း (၈၈ ၆၉၅၃၇၀၅၆၂၅)
ဒီအောက်က ပိုစ့်လေးကတော့ မနှစ်က သုခရိပ်မြုံ အလှူနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေကို မသိကြသေးသူတွေသိရအောင် ပြန်တင်ပေးချင်ပါတယ်..။
မနှစ်က လှူကြတဲ့ နိုင်ငံပေါင်း(၉)နိုင်ငံက အလှူရှင်(၁၁၁)ဦးက လှူဒါန်းခဲ့ကြတာပါ။
စာရင်းကိုတော့ သာဓု ထပ်မံခေါ်ဆိုနိုင်ကြဖို့ အောက်မှာ ဖေါ်ပြထားပေးပါတယ်..။
အလှူရှင်စာရင်းကို ဆိုဒ်ဘားမှာ ဒီနှစ်လိုပဲ UP DATE လုပ်တင်ပေးထားပြီး
Email တွေနဲ့လည်း ကာယကံရှင်တွေ လက်ထဲရောက်အောင်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့
လက်ဆင့်ကမ်း ပြီး ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်.။
အလှူငွေလွှဲတဲ့နေ့က ဒီလိုလေးရေးပြီး ပိုစ့်တင်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒီနေ့ ၂၀၁၀ခုနှစ်၊ဇန်န၀ါရီ(၃၁)ရက်နေ့မှာပဲ မြန်မာပြည်ကို ငွေလွှဲပြောင်းလိုက်ပါတယ် ။ စင်ကာပူနိုင်ငံနဲ့ နိုင်ငံအရပ်ရပ်မှ စုစုပေါင်း အလှူရှင် (၁၁၁) ဦးထံက စင်ကာပူဒေါ်လာ(၆၄၈၂.၇၅)တိတိ ရရှိထားပြီး၊ ယနေ့ စင်ကာပူငွေလွှဲနှုန်းပေါက်ဈေးအရ ငွေကျပ် လေးဆယ့်ခုနှစ်သိန်း(၄,၇၀၀,၀၀၀ိ/) တိတိရရှိပါကြောင်း ၀မ်းမြောက်ကြည်နူးဖွယ်ရာ သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်..။
ရသမျှပိုက်ဆံအားလုံးကိုအဲဒီ့နေ့ပေါက်ဈေးနဲ့ (၃၁.၁.၂၀၁၀)နေ့မှာ စင်ကာပူနိုင်ငံ ရွှေရတနာ ငွေလွှဲကနေတဆင့် စာရေးဆရာမ မနော်ဟရီထံကို တိုက်ရိုက်လွှဲအပ်ခဲ့တာပါဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာမမနော်ဟရီက ( ဧည့်ခံစရိတ်အတွက် ကုန်ကျငွေပါစိုက်ထုတ်ပြီး) လျှပ်တပြက်ဂျာနယ်တိုက်မှာ အခမ်းအနားလေးတစ်ခုနဲ့ သုခရိပ်မြုံမှတာဝန်ခံ ဒေါ်အေးအေးမြင့်ထံ (၁၁-၂-၂၀၁၀)နေ့မှာ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်.။
အခမ်းအနားလေးလုပ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ လူပေါင်း ၁၁၁ ယောက်
နိုင်ငံပေါင်း ၉ နိုင်ငံ
အတူတူ ကုသိုလ်ယူ လှူဒါန်းကြရတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်
အားလုံး ထင်ထင်ရှားရှား ကျေကျေနပ်နပ် သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ဖို့
စာနယ်ဇင်းသမားများရှေ့မှာ သတင်းပေး လှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.။
ဒီပွဲလေးမှာ ဆရာမ မနော်ဟရီက
မနှစ်က ဒီဇင်ဘာတစ်ရက်က အိန္ဒြာက သူ့ဘလော့ခ်ကနေ HIV ကူးစက်ခံ မိဘမဲ့ကလေးတွေအတွက် တစ်ခုခုလုပ်ပေးချင်တယ်ဆိုပြီး ရတီမှာပါခဲ့တဲ့ သူ့ဝတ္ထုတိုလေးနဲ့ ပို့စ်တစ်ခု တင်ပြီး
အလှူငွေ စကောက်ခဲ့ပါတယ် ။
ကျွန်မတို့လည်း အလှူငွေတွေဝိုင်းထည့်ခဲ့ကြပြီး ဒီဇင်ဘာတစ်ရက်ကနေ ဇန္နဝါရီ ၃၁ရက်ထိ ကောက်ခံခဲ့တာမှာ အလှူငွေ ၄၇သိန်းရခဲ့ပါတယ်။ စင်ကာပူ၊ဂျပန်၊မလေး၊ဆိုက်ပရပ်စ်၊ဒူဘိုင်း၊ကာတာ၊ထိုင်း အမေရိကန် စတဲ့ နိုင်ငံတွေက စာရေးတဲ့ စာဖတ်တဲ့သူအလှူရှင်(၁၁၁)တွေက ဝိုင်းဝန်းလှူဒါန်းထားတဲ့အလှူငွေများဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒီလူတွေက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မသိကြပဲ ကလေးတွေအပေါ် ဂရုဏာသက်မှု အိန္ဒြာရဲ့ စာတစ်ကြောင်း စာတစ်ပုဒ်ကြောင့် ရလာတဲ့ ဂရုဏာနဲ့ ဝိုင်းဝန်းလှူဒါန်းခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက် အလှူငွေကို လွှဲအပ်ဖို့အတွက် ဗမာပြည်ပြန်လာမယ့် ကျွန်မကို အကူအညီတောင်းတာကြောင့် ကျွန်မ တာဝန်ယူပြီး ဒီအလှူငွေတွေကို အားလုံးကိုယ်စား လှူဒါန်းပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က အလှူရှင်ပေါင်း ၁၁၁ ဦး စုပေါင်းလှူဒါန်းတဲ့ငွေဖြစ်သည့်အတွက် အားလုံးလည်း ရှင်းလင်းသွားအောင်၊ သာဓုလည်းခေါ်နိုင်အောင် ဒီလို စာနယ်ဇင်းလူကြီးတွေရှေ့မှာ ခုလို အလှူငွေပေးအပ်ပွဲလေးလုပ်ပြီး ပေးရတာ ဖြစ်ပြီး နောက်နှစ် ဒီလိုအချိန်မှာလည်းဒီလို အလှူလေးတစ်ခုဆက်လုပ်သွားနိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြပါ ဦးမယ်။ "
၂ လတိတိ အပင်ပန်းခံပြီးနိုင်ငံပေါင်းစုံမှ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများကို ဖုန်း Email များနဲ့ဆက်သွယ်ပြီး စိတ်ရောကိုယ်ရောနှစ်ပြီး ၀ိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်..။
အလှူလေးအထမြောက်သွားတော့လည်း စိတ်ပင်ပန်း လူပင်ပန်းသမျှတွေပျောက်သွားရပြီး ဖေါ်မပြတတ်အောင် ၀မ်းသာပိတိတွေဖြစ်ကြရပါတယ်..။
မေတ္တာ စေတနာ ကရုဏာတွေ နဲ့ စိတ်တူကိုယ်တူလှူဒါန်းခဲ့ကြတဲ့ ပွဲလေးမို့ နတ်လူသာဓု ခေါ်နိုင်ကြမယ်လို့လည်း ယုံကြည်မိပါတယ်..။
မနှစ်က အလှူနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေ ဒီနှစ်အလှူနဲ့ ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေ မရှင်းလင်းတာ သိချင်တာများရှိခဲ့ရင်
အိန္ဒြာ ( PH:65 91796542 ) eaindra.mm@gmail.com ကို အချိန်မရွေး တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်လို့ လေးစားစွာ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ် ။
မြန်မာပြည်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းချင်ရင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားရောက်လှူဒါန်းချင်ကြတယ်ဆိုရင်တော့.
အမှတ် ( ၉၇၉-၉၈၂)၊ တပင်ရွှေထီးလမ်း၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မြို့။
(မထသ ၃၆ ဘတ်စ် အစိမ်း၊ တံတားထိပ်မှတ်တိုင်ရှေ့)
တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ် ။ ။
တာဝန်ခံ ဒေါ်အေးအေးမြင့် ၅၈၁၉၅၅ နဲ့
(၁) ဆရာမဒေါ်သန်းမြင့်အောင် (၀၉-၉၉-၂၈၅၄၉ ,၂၀၅၄၅၁)
(၂) ဒေါက်တာ ထားထား ( စုထား ) suhtar@gmail.com တို့ဆီ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
ဒီစာကတော့ သုခရိပ်မြုံကို ဦးစီးခေါင်းဆောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာမ ဒေါ်သန်းမြင့်အောင်ရေးလိုက်တဲ့ စာလေးပါ..။
ဒီပုံလေးကတော့ ဆရာမ မနော်ဟရီက အလှူငွေလွှဲပြောင်းပေးအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်..။
ဒီပုံလေးကတော့ တာဝန်ခံဆရာမ ဒေါ်အေးအေးမြင့်မှ ၁၁၁ ယောက်သော အလှူရှင်တွေနဲ့ တာဝန်ယူလှူဒါန်းပေးသူတွေကို ကျေးဇူးတင်စကားပြောနေတဲ့ပုံလေးပါ..။
စိတ်ထက်ထက်သန်သန် မေတ္တာ ကရုဏာများနဲ့ လှူခဲ့ကြတဲ့ အလှူရှင်များရဲ့စာရင်း အသေးစိပ်ကိုတော့ ကျွန်မတင်ပေးထားတဲ့ လင့်ခ်လေးတွေက တဆင့်ဝင်ရောက် ဖတ်ရှုသာဓုခေါ်နိုင်ကြပါတယ်ရှင်။
၂၀၀၉ မှာ လှူဒါန်းခဲ့ကြသူများ အခု ၂၀၁၀ မှာ ထပ်မံလှူဒါန်းကြသူများ
ထပ်မံတိုးပွားလာတဲ့ အလှူရှင်များနဲ့ ထက်ထက်သန်သန် ၀ိုင်းဝန်းအလှူခံပေးကြတဲ့ ညီအကိုမောင်နှမ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ တွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း...........
မေတ္တာတွေ စေတနာတွေ စာနာမှုတွေ ကွန်ယက်တစ်ခုလို ချိတ်ဆက်လှူဒါန်းကြတဲ့ ပွဲလေးကို လှူဒါန်းကြဖို့အတွက် အချိန်(၂)လ ရသေးတော့ ခင်မင်ရသော မိတ်ဆွေ မောင်နှမများ အားလုံး အေးအေးဆေးဆေး လှူဒါန်းနိုင်ကြပါတယ်။
လောလောဆည် လှူဒါန်းကြသူတွေနဲ့ စာရင်းပေးထားတဲ့ သူတွေကို ဆိုဒ်ဘားမှာတင်ပေးထားပြီး
ယခင်နှစ်က တင်ခဲ့တဲ့ ပိုစ့်လေးတွေကိုပါ အလွယ်တကူဖတ်လို့ရအောင် အောက်မှာဖေါ်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်..
ဆရာမြင့်မိုးအောင်ရေးစပ်ထားတဲ့ ကဗျာလေးကိုပါ ထပ်တူထပ်မျှခံစားနိုင်ကြဖို့ ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေဦး..
ချိုင့်ခွက်များတဲ့ လမ်းပေါ်မှာ သူချော်လဲသွားခဲ့တယ်
(ဒီကလေးငယ်လေးတွေအတွက် ရန်ပုံငွေရှာဖွေပေးခဲ့တဲ့ အဖြူရောင်သက်တံ့ ကဗျာရွတ်ဆိုပွဲမှာ
ရီဝေယံ၊ အေးဝတ်ရည်သောင်း စတဲ့အနုပညာရှင်တွေက ရွတ်ဆိုခံစားပေးထားတဲ့ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါ)
ကမ္ဘာ့ ( AIDS ) နေ့ကိုရောက်လာခဲ့ပြန်ပါပြီ..။
မနှစ်ကဒီလိုအချိန်မှာပဲသုခရိပ်မြုံHIV ကူးစက်ခံမိဘမဲ့ကလေးများ ဂေဟာအတွက်
အဲဒီ့အလှူငွေစုစုပေါင်း ၄၇ သိန်း ကို သူခရိပ်မြုံဂေဟာလေးမှာ အထွေထွေ ၀န်ဆောင်မှုတွေမှာ အသုံးပြုခဲ့နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်.။
ဒီနှစ်လည်း ဒီလိုပဲ မိတ်ဆွေ ညီအကိုမောင်နှမတွေ စုပေါင်းပြီး ထိထိရောက်ရောက်
လှူဒါန်းနိုင်မယ့် အလှူမျိုးလေးနဲ့ စုပေါင်းလှူဒါန်းကုသိုလ်ယူကြပါဦးစို့လို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချင်ပါတယ်။
အလှူငွေတွေကို မြန်မာပြည်မှာ စာရေးဆရာမ မနော်ဟရီက အစစအရာရာ ကုသိုလ်ဖြစ် တာဝန်ယူလှူဒါန်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်..။
ဒီဖြတ်ပိုင်းလေးတွေကတော့ အလှူငွေလက်ခံရရှိကြောင်းနဲ့ ကျေးဇူးတင်မှတ်တမ်းလေးတွေပါ။
ဒီသတင်းလေးကို အသေးစိတ်ပြန်သိချင် ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သုခရိပ်မြုံ ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍလေးမှာ ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်..။
ညီအကိုမောင်နှမတွေက ထင်တာထက်ပိုပြီး အားတက်သရော လှူဒါန်းခဲ့ကြလို့ ကျေးဇူးတင်ဝမ်းသာရသလို ခုချိန်အထိတောင် ဖုန်းဆက်ပြီး မြန်မာပြည်ပြန်ရင်း လှူနိုင်ဖို့ သုခရိပ်မြုံရဲ့ လိပ်စာနဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို စုံစမ်းကြသူတွေ ရှိနေတုန်းပဲမို့ အများကြီး ကျေနပ်ပိတိဖြစ်လို့မဆုံးပေါ့..
ဒီနှစ်တော့ ကလေးဦးရေ ၆၀ အထိတိုးလာပြီး ကလေးလေး ၃ ယောက်ကိုတော့
လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ စိတ်မကောင်းဖွယ်ရာ ကြားသိရပါတယ်။
မေတ္တာတွေ စေတနာတွေ ကွန်ယက်တစ်ခုလို ချိတ်ဆက် ပေါင်းစည်းမိလိုက်ကြတဲ့ အလှူပွဲလေးတစ်ပွဲပါပဲ..။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လူချင်းတွေတောင် မသိကြ မမြင်ဘူးကြတဲ့ ဒီ(၁၁၁)ယောက်ဟာ
ကုသိုလ်တွေ အတူတူရရှိခဲ့ကြပြီး သာဓုတစ်ပြိုင်တည်းခေါ်ဆိုခွင့်ရရှိခဲ့ကြပါတယ်.။
" ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တကယ်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေလက်ထဲအရောက် အလှူငွေ ထည့်အပ်နိုင်ခဲ့တာအတွက် လှူဒါန်းသူတွေရော ကြားသိရတဲ့သူတွေပါ ကျွန်မနဲ့ထပ်တူ ကျေနပ်ဝမ်းမြောက် သာဓုခေါ်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်နေပါတယ်.။"
ဒီနှစ်တော့ သုခရိပ်မြုံဂေဟာကိုတင်မဟုတ်ဘဲ ကောက်ခံရရှိတဲ့ငွေပေါ်ကို မူတည်ပြီး
HIV နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆေးရုံတွေ ၀န်ဆောင်မှုတွေအပြင်
အလားတူ စေတနာ့ဝန်ထမ်းလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကိုပါ သွားရောက်လှူဒါန်းကြဖို့ စီစဉ်မျှော်လင့်ထားပါတယ်..။
တစ်ဒေါ်လာတိုင်းဟာ မြန်မာငွေ ၇၀၀ - ၈၀၀ နဲ့ညီမျှတော့ တစ်ဒေါ်လာပဲထည့်ရင်တောင် ထမင်းတစ်နပ်စာတော့ ပံ့ပိုးပေးလိုက်နိုင်မှာပါ။
ဒီလိုနဲ့ပဲ မနှစ်က နိုင်ငံအရပ်ရပ်က အွန်လိုင်းစာဖတ်သူတွေ စာရေးသူတွေ စေတနာရှင်တွေ (၁၁၁)ဦးရဲ့ နည်းနည်းချင်းဆီ စုပေါင်းကြရာကနေ ၄၇သိန်းဆိုတဲ့ ငွေပမာဏဖြစ်တည်လှူဒါန်းနိုင်ခဲ့ကြတာပါ.။
ဒီနှစ်အတွက်၂၀၁၀ဒီဇင်ဘာ(၁)ရက်နေ့ကနေ ၂၀၁၁ ဇန်န၀ါရီလကုန်အထိ
ကိုဆန်နီ (ဖုန်းနံပါတ်ကို ထပ်မံတင်ပြပေးပါမည်။)
ဒီနှစ်တော့ Facebook မှာပါ တင်မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် ဖုန်းဆက်လို့ဖြစ်စေ Facebook မှာ message ပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေ ဆက်သွယ် လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်း
အလှူငွေကောက်ခံရရှိတဲ့ အလှူငွေစာရင်းတွေကို Blog နဲ့ Facebook တွေမှာ တင်ပေးသွာမှာဖြစ်ပါကြောင်း..
မိတ်ဆွေ မောင်နှမ ညီအစ်မများကို လေးစားစွာ သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်ရှင်.။
တငြိမ့်ငြိမ့်ရင်ခုန်သံတွေက ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ မောင်းနှင်သွားခဲ့တာ..
နိုဝင်ဘာတွေထဲက ၂၆ ရက်မြောက်တစ်နေ့တာဟာ..၀ါရည်ရွှေလဲ့လို့
အဲဒီ့နေ့ပွင့်တဲ့ ပန်းပွင့်တိုင်းက ပန်းနုရောင်ရနံ့တွေချည်း သင်းထုံယစ်မူးနေခဲ့တယ်..။
လတ်ဆတ်ပျိုမြစ်နေတဲ့နုလုံးအိမ်ထဲမှာ အချစ်ဟာ ချက်ချင်း ဖူးငုံသီးပွင့်သွားခဲ့ပေါ့..
တိုးတိုးဖွဖွ လေသံဖျဖျလေးအောက်မှာ..အရှက်ကလေးတစ်ရှက်က မခို့တရို့ခေါင်းငုံ့လို့
ငါ ချစ်နေတာ သိတယ်မလား ဟင့်အင်း ဟင့်အင်း မသိဘူး..သွား
နင်ငါ့ကို ပြန်ချစ်မယ် မဟုတ်လား..ဟင့်အင်း ဟင့်အင်း မသိဘူး..သွား..
အချစ်ဆိုတာ အသက်အရွယ်ရာသီ ရေခံမြေခံမှာ စိုးရိမ်ရေမှတ်အထိတက်တဲ့ ဒီရေ..တဲ့
အဲဒါ အိန္ဒြာ့ကဗျာတွေထဲက ၀ါကျတစ်စပေါ့မောင်ရယ်..။
ငါ့ကတော့ အချစ်ဖြစ်စဉ်တွေတိုင်းမှာ အမြဲတမ်း အရေးပေါ်အခြေနေချည်းပေါ့.
အခု သတိရခြင်းတောင်ခြေမှာ လာလာဝေနေတဲ့ မြူနှုင်းကဘယ်ဘ၀က အချစ်ကြွေးဖြစ်လိမ့်မှာပါလဲ
ကိုယ်က ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် ကြိုးလိုကျစ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို တုတ်နှောင်နေခြင်းမှာ..ပျော်ရွှင်လို့
ကိုယ်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘောင်ခတ်ပြီး ကိုယ့်သက်ပြင်းနဲ့ကိုယ် ဆင်းရဲတွင်းနက်လို့
ကိုးနှစ်ကိုးမိုးနဲ့ ကိုးနှစ်ကိုးမိုးနောက်က နောက်ထပ် ကိုးနှစ်ကိုးမိုး.....
အချစ်နဲ့မြဲခဲ့တဲ့ တွဲလက်တွေထဲမှာ...အချစ်ပြီးရင် နောက်ထပ်ခေတ်အစားဆုံးက အချစ်ပဲဖြစ်နေခဲ့ကြတယ်...
အချစ်ဆိုတာ အနမ်းရှိမှ ပွင့်လို့လှတဲ့ နှင်းဆီဖူးပါကွယ်တဲ့
အဲဒါလည်း အိန္ဒြာရဲ့ ကဗျာလေးတစ်စပါပဲ..။
" An empty street , An empty house , A hole inside my heart , I’m all alone .
The rooms are getting smaller "
ဆိုတဲ့သီချင်းစာသားမျိုးကို ကိုယ်က မျက်မှောင်ကြုတ်နားထောင်နေမိပြီး
" Morning, just another day Happy people pass my way Looking in their eyes "
ဆိုတာမျိုး ဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့ ကြားရာအရပ်က ပြေးထွက်ချင်နေမိတတ်တယ်.။
ကိုယ် အသိမှတ်မဲ့ ညည်းနေမိတဲ့ သီချင်းစာသားတွေက
"ဟိုး..အဝေးမှာနေတဲ့အခါ မျက်ဝန်းတွေထဲ မင်းပဲမြင် ပြန်ဆုံနိုင်ဖို့ နေ့ရက်ကလေးတွေ မရောက်သေးခင်" ဆိုတာမျိုးတွေပဲဖြစ်နေခဲ့ပါပေါ့.
"ကောင်းကင်ဆီထိုးပျံလိုက်တဲ့ တောင်ပံဖျားက ဗျာပါရတွေက အစ
မြေပြင်ဆီလှမ်းမျှော်ကြည့်လိုက်တဲ့ မျက်ဝန်းအစုံက မျက်ရည်ပူတွေ အလည်
လေထုထဲပဲ့တင်ရိုက်သွားတဲ့ နှုတ်သီးဝက ရင်ကွဲနာသံအဆုံး
ဆိုတဲ့ ကဗျာမျိုးကို ဘယ်သူမှမကြားအောင် တိုးတိုးလေးရွတ်ဆိုနေတတ်တဲ့ ခံစားလွယ်သလောက် ခေါင်းသိပ်မာတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ...
ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုတွေထဲက ကိုယ့်အလူးအလဲ ကျဆုံးခန်းတွေ အကြောင်းကိုလည်း သူ့ဘာသာ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတတ်ခဲ့တာပါလေ..။
အချစ်နဲ့ထွက်တဲ့ဒေါသတွေက ကြည်ပြာရောင်တွေချည်းပေါ့ ပန်ဒိုရာ..
သီးစုံကုလားဟင်းနဲ့ ငါးဖယ်အောင်းငပိကောင်ကြော်ကြိုက်တာကလွဲလို့ ဘယ်နေရာမှ မတူညီကြတဲ့ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ဟာ..
တစ်ယောက်ရယ်မောသံမှာ တစ်ယောက်ဒေါမနသတွေက အငွေ့ပျံလို့
တစ်ယောက်ခြေသံနဲ့ တစ်ယောက် ခရီးဆက်ခဲ့ကြတာ ခုထိပေါ့...
တိုးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်နေတဲ့ အခန်းငယ်လေးထဲမှာ ကိုယ်က အလွမ်းဆိုတာနဲ့ လက်ပွန်းတတီးမနေရဲပါဘူး။ တမ်းတစိတ်တွေကို မျက်နှာသာပေး အရောမ၀င်ရဲခဲ့ဘူး...
ငါက ဒီစာကိုရေးရင်း မျက်ရည်ကျမနေပါဘူးလို့ နင့်ကို ညာပြောလိုက်တဲ့ အခါ
နင်က သက်ပြင်းတစ်ချက်ရှိုက်ပြီး ယုံချင်ယောင်ဆောင်နေပေးလိုက်ပါဦးနော်..
ဟိုးးးကျန်ခဲ့တဲ့ ၁၂ နှစ် နိုဝင်ဘာလက
ဖူးပွင့်ချယ်ရီလို ကဗျာဆရာပေါက်စ ကဏ္ဍမှာ...
သူ့ကဗျာလေးပါလာလို့ ထားစရာမရှိ ၀မ်းသာပျော်ရွှင်နေတဲ့ ကလေးမလေးကိုလေ
သူက "အချစ်၆နှစ်ပြည့် " တဲ့...ကဗျာလေးတစ်ပုဒ် ဒီလို ရေးစပ်ခဲ့ဖူးတယ်..။
အချစ် ၆ နှစ်ပြည့်
လွင့်မြောလှုပ်ခတ်ရလွန်းစွာ မျက်ရည်လဲ့လဲ့ ပျော်ဝင်ရူးသွပ်သွားတာကလွဲလို့
လိုချင်တပ်မက်လွန်းပါလျက် လက်ခံပိုင်ဆိုင်ဖို့ အစိုးရိမ်ပိုခဲ့။
နှိုင်းတုယှဉ်ခိုင်းစရာ စကားစုရှာဖွေရာမဲ့မဲ့ မြတ်နိုးကိုးကွယ်ခဲ့။
ကိုယ့်ဝိညာဉ်တို့ ရွှင်မြူးရာ ကောင်းကင်ဘုံဖြစ်သူ
ဘယ်အရာနဲ့မှ မလဲနှိုင်ပါဘူး ကျေးဇူးတင်တယ်လေ.။
နတ်ရေးတဲ့ဖူးစာဖက်ပေါ့ကွယ် .။ ။
( ချယ်ရီမဂ္ဂဇင်း ၁၉၉၉ခုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာလ)
(၂၆.၁၁.၁၉၉၂ မှ ၂၆.၁၁.၂၀၁၀) အထိ ၁၈နှစ်တာကာလ ချစ်ခြင်းများဖြင့် အမှတ်တရ..။
at 10:42 AM 13 comments:
ဘလော့နှစ်နှစ်ပြည့် ရသစာအုပ်စင်နဲ့ နိုဝင်ဘာအပျော်အရွှင်တွေ
နိုဝင်ဘာမှာ အမှတ်တရတွေ သိပ်များနေပါရောလား..
နိုဝင်ဘာဆီကနေ ကျွန်မဆီကို အတိုင်းမသိတဲ့ အင်အားတွေ စီးမျော တိုးဝင်လာခဲ့ပါရောလား..
နိုဝင်ဘာမှာ "အိန္ဒြာ ဘလော့ဂ်စပေါ့ဒေါ့ကွန်း" လို့ ၀ါသနာပါရာမနေသာ လုပ်မိခဲ့တဲ့
ဘလော့ဂ်လေးလည်း၂ နှစ်တိတိ ပြည့်ခဲ့ပါပြီ.။
တစ်ခုခုတော့ ရေးဦးမယ် ..
ဘာမှမရေးနိုင်တောင် မနှစ်က မမ မနော်ဟရီနဲ့ ပေါင်းရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့
အက်ဆေးနဲ့ကဗျာအတွဲအစပ်ကလေးကို ပြန်တင်ရမယ်..စသဖြင့်တွေ တွေးမိချိန်မှာပဲ
၂၀၀၆ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာ ရတီမဂ္ဂင်းမှာပါခဲ့ပြီး အခု နိုဝင်ဘာဆို ၄ နှစ်တိတိပြည့်ခဲ့တဲ့ .အွန်လိုင်းကနေ
အလှူငွေ ၄၇ သိန်းတိတိ " HIV မိဘမဲ့ကလေးငယ်များဂေဟာ(သုခရိပ်မြုံ)"အတွက် အလှူခံပေးခဲ့တဲ့..
အခု အလင်းသစ်မဂ္ဂဇင်းမှာ ပြန်လည်ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့
"အခိုးအငွေ့တံတား" ဆိုတဲ့ ၀တ္ထုတိုလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့..
အဲဒီ့ဝတ္ထုတိုလေးက အလင်းသစ်မဂ္ဂဇင်းကနေပဲ ဆုပေးပြီးအသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရတယ်လို့သိလိုက်ရပါတယ်..။
ဖိတ်ကြားခဲ့တယ်လို့ သိရလို့လည်း ၀မ်းသာရပါတယ်.။
ဆရာမ ဒေါ်မေငြိမ်းက ရသစာအုပ်စင်မှာ မိတ်ဆက်ပေးဖို့ရွေးထားတယ်ပြောတော့ ထပ်ဝမ်းသာရပြန်ပါတယ်..။
အဲသလို အပျော်တွေ စုပြုံပေါင်းစပ်ပြီး နိုဝင်ဘာ ဘလောဂ့် နှစ်နှစ်ပြည့်ကို ပြင်ဆင်ခင်းကျင်းရင်း
အမှတ်တရ လုပ်ရရင်ကောင်းမယ်လို့ တွေးမိတောမိပြီး...........
အစ်မမေငြိမ်းရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ 18.11.2010 နေ့ကVOAရသစာအုပ်စင်ကဏ္ဍမှာ လွှင့်ခဲ့တဲ့ အသံဖိုင်နဲ့ပါ
ဘလော့ဂ် နှစ်နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ အစီအစဉ်ကလေးပါ..။ ၀တ္ထုလေးကိုတော့ ဒီမှာ တင်ခဲ့ဖူးပါတယ်..။
at 6:32 AM 20 comments:
အမှောင်ထဲမှာ အပြုံးက ယုံကြည်ချက်နဲ့ပွင့်ပြတယ်။
အလိုလို တိုးဝင်ပူးကပ်လာတဲ့ ခွန်အားသတ္တိများ
မကြုံဖူးတဲ့ စကားလုံးတွေ သမိုင်းစာမျက်နှာပေါ်ထင်ဟတ်ခဲ့။
ဒီမျက်ရည်တွေဟာ..အရင်မျက်ရည်တွေကို ဆေးကြောပေးမယ့် မျက်ရည်ပေါ့...
ဒီနေရာကနေ တစ်ဖ၀ါးချင်းပြန်စကြမယ်..ပန်းတိုင်ဆီ။ ။
သူ့ယုံကြည်ချက် ရွှံ့တွေ နွံတွေကြား
ပတ္တမြား ထပွင့်နိုင်ကြောင်း ပြလိမ့်မယ်။
(ပိတောက်ပွင့်သစ်မှာ စိစစ်ရေးငြိခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးပါ ။ ဘလော့ဂ်မှာတော့ တင်ဖူးပြီးသားပါ)
ထလော့မြန်မာ၊ အိုမြန်မာတို့ 
တို့ ရွာ တို့ မြေ၊ တို့ ရွာမြေ၀ယ်
တို့ ရွာတို့ မြေ၊ တို့ ရွာမြေ၀ယ်
အားမပျော့နှင့်၊ မလျှော့လုံ့ လ
ဤမြေဤရွာ၊ ဘယ်သူ့ ရွာလဲ
ဤယာစပါး၊ ဘယ်သူ့ စပါးလဲ
ဂီတဉ္ဖလီစာစုတွေထဲက ဒီကဗျာလေးက ကျွန်မ အရမ်းကြိုက်တဲ့ ကဗျာလေးပါ
1913 ခုနှစ်မှာ စာပနိုဘယ်လ်ဆုရခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂါလီကဗျာဆရာကြီး Rabindranath Tagore (1861-1941) ရဲ့ GITANJALI (Song Offerings) ကဗျာစုကို
1923 ခုနှစ်မှာ စာပနိုဘယ်လ်ဆုရခဲ့တဲ့ အိုင်းရစ် ပြဇာတ်ရေးဆရာ William Butler Yeats (1865-1939) ကနေ အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို ဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ်..။
မြန်မာဘာသာကို တဂိုးစာပဒေသာစာအုပ်မှာ ဆရာကြီး ဒေါက်တာမောင်ဖြူး ၊ ဆရာကြီး ဇော်ဂျီနဲ့ ၊ ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်တို့က ဘာသာပြန်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်..။
ဆရာမြသန်းတင့်ဘာသာပြန်ထားတဲ့ကဗျာလေးကိုလည်း Zephyr ကမျှဝေပေးတဲ့ အတွက် ထပ်မံဝေမျှပေးထားပါတယ်..။ ( ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ဇက် )
" တစ်ခေါက်လောက်ဖြစ်ဖြစ် ရွတ်ဆိုကြည့်လိုက်ကြပါဦး..။"
စိတ်သည် ကြောက်ရွံ့ခြင်း ကင်း၏
အသိဥာဏ် တရားသည် လွတ်လပ်၏။
ကမ္ဘာလောကကြီးကို ပိုင်းခြားထားခြင်း ကင်း၏။
သစ္စာအနက်မှ စီးဆင်း ယိုထွက်၏။
အကြင် အရပ်၌ မောပန်းခြင်းမရှိသော ၀ီရိယသည်
အတွေးအယူ၊ အပြုအမူတို့ ကျယ်ပြန့်အောင်
လွတ်လပ်ခြင်း နိဗ္ဗာန်ရှိရာ ထိုအရပ်၌
ခေတ်ကို အော်ခေါ်ကြည့်လိုက်မိတဲ့ ပဲ့တင်သံ
ငါတို့ ခြေထောက်က အမြစ်တွေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အထိ
နဂါးငွေ့တန်းဂလက်ဆီ တစ်နံတစ်လျား မျှော်လင့်ရမ်းရော်လိုိ့
တစ်ထစ်ခြင်း လျှော့ချပေးခဲ့ရသော ငါတို့ ရဲရင့်ရောင် အမှန်တရားများ
ဒီအနေအထား အတိုင်း နေ နေ ရတာကြာတော့လည်း
နေကြာတွေ အဖြစ် ဆက်လက်ဖူးပွင့်လိုက်ကြတာပေါ့ကွာ..။
အခြေအနေက လက်ပမ်းကျချိန်မှာ လက်မတင်လေး လက်တစ်လုံးခြားထားတာ
ဒီအဖြေထွက်ဖို့အတွက်ဆို ဒီလောက်ပေးဆပ်ဖို့လိုပါ့မလား ဟေ့ကောင်ရေ..
ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အီလက်ထရောနစ်နဲ့ ခလုတ်နှိပ်ရယူနိုင်တဲ့ခေတ်ကြီးထဲ
ငါတို့ တက်ညီလက်ညီညံ့ခဲ့ကြတဲ့ အကြောင်း DJ တစ်ပုဒ်လောက်ပွတ်ကြည့်လိုက်ကြစို့..။
AD ဘယ်နှစ်ကနေဘယ်နှစ်အထိ ကာလအတိုင်းအတာ ဘယ်၍ဘယ်လောက်အကြာ
ခေတ် ဆိုတာ ဖျတ်ကနဲဖျတ်ကနဲ ၊ မလိုအပ်ရင် ကျော်ဖတ်သွားလို့ရနိုင်သေးတယ်ပေါ့
ဗီလိန်တွေ သရုပ်ဆောင်ကောင်းလေ ဇာတ်နာလေ
ခေတ်ရဲ့နဖူးပြင်မှာ အညိုအမည်းတွေ ထင်လေဆိုယုံလောက်ပါပဲ
အောင်နိုင်ခြင်း ရှုံးနိမ့်ခြင်း အတုန့်အလှည့် ရန်ကြွေးရန်စ
တိုးတက် ဆုတ်ယုတ်မှုအနုပညာ ပဋိပက္ခ ပရိယာယ်နဲ့ နည်းနာဆိုတာတွေကလည်း
Dota Game ကစားနည်းတွေလို သည်းထိတ်ရင်ဖိုပြကွက်တွေလောက်ပေါ့..။
ငါတို့ ခေတ်ကို နောက်ဘ၀အထိသယ်မသွားနိုင်ပါဘူး
ငါတို့ တစ်ခေတ်ထဲ နှစ်ခါလူပြန်ဖြစ်တဲ့အထိ ပြသဒါးမဆန်လောက်ပါဘူး
တစိ့မ်စိမ့် ပူနွေးယိုယွင်းနေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို နည်းပညာတွေနဲ့ကျားကန်လို့
နည်းပညာပင်လယ်ပြင်ထဲ ငါတို့ မြုတ်ချည်ပေါ်ချည်လူးလာဆန်ခတ်လို့
ငါတို့အိပ်မက်တွေကို ငါတို့ကိုယ်တိုင် Create လုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ
ငါတို့အနာဂါတ်ဆိုတာဟာ ငါတို့သွေးပြန်ကြောအတိုင်း နီ ရဲ ပူ နွေး နေ တာ ပါ...။
ငါတို့ တစ်ကြိမ်တစ်ခါ မှားယွင်းခွင့်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုခဲ့ရင်
ငါတို့ တိတိကျကျ ခြေခြေငံငံ အမှန်အတိုင်း မှားကြည့်လိုက်ကြစို့ ဟေ့ကောင်ရေ.
ကမ္ဘာဟာ ရွာပြီးရင် ဘာဆက်ဖြစ်လိမ့်ဦးမှာလဲ..
နည်းပညာတွေ ရင်သပ်ရှုမော ဆန်းကြယ်တိုးတက်လာတဲ့ အခါ
မနာကျင်စေရဘူး တစ်စက္ကန့်အတွင်းပြာပုံအတိဖြစ်သွားယုံလောက်ပါ။ ။
at 9:19 AM9comments:
တစ္ဆေ ကြောက်တတ်တဲ့ အနာ
ကောင်းကင်ပေါ် တိမ်အတုတွေ ပစ်တင်ပြီး
တစိမ်စိမ့် ရွာသွန်းဖြိုးတဲ့ မိုးစိမ်းတွေက
တစ္ဆေတွေက ခေါင်းတလားထဲမှာ...က ခုန် တယ်။
သင် ပျင်းရိတဲ့အခါ သမ်းဝေလိုက်ပါ၊
သင် အားငယ်တဲ့အခါ စစ်တုရင်ကစားပါ၊
သင် ကြောက်ရွံ့တဲ့အခါ မေတ္တာသုတ်ရွတ်ပါ၊
အထပ်ထပ် ရစ်ကျော့ခံနေရတဲ့ စီဒီဓါတ်သားမှာ
ပခြုပ်ထဲက ညောင်းညောင်းရိရိ မြွေဆိုးတစ်ကောင်ရဲ့
ခေါင်းတလားထဲမှာ...တစ္ဆေတွေက က ခုန် တယ်။
သင် စိတ်ညစ်ညူးတဲ့အခါ တောင်တက်လေ့ကျင့်ပါ၊
သင် လွမ်းဆွတ်လာတဲ့အခါ သစ်ပင်စိုက်လိုက်ပါ၊
သင် ရယ်မောချင်တဲ့အခါ တစ္ဆေကပွဲကြည့်ပါ၊
ရေခဲရိုက်ပြီး သိမ်းထုပ်ပါ ။
အဆာပြေရဦးမယ့် နေ ၀င် ဖျိူး ဖျ မှာ
ညနေခင်း ၀တ်စုံက ။ ဘာ ??!!!
ကတိတွေဖေါင်းပွလွန်းတဲ့ ၀ပ်ကျင်းလို့..။ ။
ရေးထားတာ ကြာပါပြီ ၊ မုဒိတာမှာလည်း ပါခဲ့ပါသေးတယ်
ဖတ်ပြီးသားဆိုရင်လည်း တစ်ခေါက်လောက် ထပ်ဖတ်ကြည့်ပါဦး..။
at 8:48 AM6comments:
ကိုယ့်စိတ်နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် မြင်မြင်သမျှ ခံစားပစ်လိုက်ဖို့
ရင်ဘတ်ကို အဆင်သင့်ဖွင့်ပြီး စောင်ကြိုနေခဲ့ကြရတာ
လက်ခုပ်သံတွေ ရယ်မောသံတွေ သြဘာသံတွေ
ဘယ်လောက် ကြေကွဲစရာကောင်းလိုက်တဲ့ မြင်ကွင်းလဲ...
အဲသလိုမတွေးမိလိုက်နဲ့လို့ ကိုယ့်စိတ်ကို နာနာ နားချရင်း
အနည်းငယ် နေသာထိုင်သာရှိပြီးပြန်ခဲ့တယ်..။ ။
တကယ်တော့သီအိုရီက အဆန်းတကျယ် မဟုတ်ပါဘူး
ငါတို့ တတိတိနစ်မြုတ်နေပုံကြီးက ကြေကွဲဝမ်းနည်းစရာ
ငါတို့ သိသိချည်း စွန့်လွှတ်ဆုံးရှုံးရမယ်ဆိုတာကလည်း ရင်နာဆို့နစ်စရာ
ခုဆို ငါတို့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေတောင် အားအင်ချည့်နဲ့လို့
ခုဆို ငါတို့ ယုံကြည်ချက်ဆိုတာက ရေမျောကမ်းတင်ကိုဆန်လို့
ငါတို့ မျက်ရည်တွေ တောင်ပုံယာပုံစီးဆင်းခဲ့ရတာ
ငါတို့ အိပ်မက်တွေကို သင်္ဂြိုဟ်ပြာချခဲ့ရတာ
နေ လို မီး လို ပူ လှ ချည့်....။ ။
at 9:01 AM 8 comments:
ညီမလေးရဲ့ ဧည့်ခန်းဆောင်မှာ သက်သေပြဖို့ဆို
အလွမ်းတစ်အိုးကို မှ ထိုးစိုက်ခွင့် မရခဲ့ပါဘူး...၊
ချစ်သူတို့နှလုံးအိမ်တွေဟာ.. အရိုးသားဆုံး နီစွေး နေတာလေ...
ဆင်စီးမြင်းရံ ဆိုတာကြီးကိုတော့ စိတ်ညစ်တယ်။
ကိုယ် ရိတ်သိမ်းဖို့ ကိုယ် စိုက်ပျိုးရ မ တဲ့..
မစားရ ဝခမန်းကြီး မို့ စိတ်ညစ်တယ်။
ဒီ့ထက် သေဝပ် ကျိုးနွံရ မှ ဖြင့်
ခေတ်တွေကို သွန် သာပစ်လိုက်တော့..၊
ဌာန်ကရိုင်းကျကျ က ပြ ချေ ဦး .....တဲ့
ပျားရည်နဲ့ဝမ်းချ နေတာမျိုးတော့လည်း စိတ်ညစ်တယ်။
ညီမလေး စိတ်ဝိဉာဉ်ထိ ထင်နေတဲ့ အရှိုးရာ အထပ်ထပ်ကိုလည်း ယူခဲ့မယ်။
ညီမလေး သိမ်းဝှက်ထားရတဲ့ ကဗျာလေးတွေလည်း ယူခဲ့မယ်။
ညီမလေး တောင်ပံဖွင့်ဖို့အတွက် ယုံကြည်ချက်တွေလည်း ယူခဲ့မယ်...။
ညီမလေး ဆက် ဆက် လာ ခဲ့ မယ်....။
"ညီမလေးရဲ့ လွမ်းခြေရာ" ကဗျာစာအုပ်ကလေးမှာ ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့
ကဗျာဆရာတွေ ညီမလေး ညီမလေးရေးကြလွန်းလို့ ကိုယ်လည်းရေးချင်စိတ်တွေပေါ်လာပြီး
at 5:51 AM 13 comments:
ကျွမ်းကျင်သလို လိုအပ်သလို ပါးနပ်သလို
ဆုတ်ကြည့် တက်ကြည့် ကာကြည့် ကန်ကြည့်
ရှောင်ကြည့် တိမ်းကြည့် ၀ပ်ကြည့် ၀ိုက်ကြည့်
ချွတ်ကြည့် ၀တ်ကြည့် ဖြုတ်ကြည့် တပ်ကြည့်
ဟိန်းကြည့် ဟောက်ကြည့် ဟစ်ကြည့့်် ဟောင်ကြည့်
စိတ်ထင်သလို အရေးပေါ်သလို ကြုံရင်ကြုံသလို
ပေါင်းကြည့် မြှောက်ကြည့် နုတ်ကြည့် စားကြည့်
၀ါးကြည့် မျိုကြည့် အန်ကြည့် ထွေးကြည့်
ညည်းကြည့် ငြင်းကြည့် ညုကြည့် ငြူကြည့်
ရိသလို ရစ်သလို သိသလို သစ်သလို
ချိန်ကြည့် ချိတ်ကြည့် ခြောက်ကြည့် ချောင်းကြည့်
ပျောက်ကြည့် ဖျောက်ကြည့် ဖြည့်ကြည့် ဖွင့်ကြည့်
မှီးကြည့် မွှေကြည့် မှားကြည့် မှောက်ကြည့်
ရွှေ့ကြည့် ရွေ့ကြည့် လျှိုးကြည့် လျှောက်ကြည့်
ပြိုင်ကြည့် ပြေးကြည့် ခုန်ကြည့် ခေါက်ကြည့်
ထိုင်ကြည့် ထကြည့် ထေ့ကြည့် ထစ်ကြည့်
စုန်ကြည့် ဆန်ကြည့် စမ်းကြည့် ဆန်းကြည့်
လူးကြည့် လုကြည့် လှုပ်ကြည့် လုပ်ကြည့်
ကျွမ်းကျင်သလို ပါးနပ်သလို သိသလို စိတ်ထင်သလို
လိုအပ်သလို အရေးပေါ်သလို ရိသလို ကြုံရင်ကြုံသလို
ငါးကဗျာတွေ ပြီးတော့ အိန္ဒြာက အရူးကဗျာတွေ စုပါမယ်..။
အခု ရှိတဲ့ ကဗျာတွေက စပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
ထွက်ပြေးတဲ့ ငါ့စိတ်ဟာ ငါ့ခန္ဓာထဲကထွက်မရဘူး
အရူးဟာ ဆိုင်ထဲထိ စတိုင်ကျကျဝင်ထိုင်တယ် ။ ခြေထောက်တွေကို ပလ္လင်ချိတ်လိုက်တယ် ။
ဆေးလိပ်ကို ဟန်ပါပါခဲလိုက်တယ်။ မျက်မှန်ကျိုးကို ထုတ်ပြီးတပ်လိုက်တယ်။
ကော့တေး(လ်) အရက်စပ်ခိုင်းတယ်။ ပုဇွန်ခေါင်းပြတ်ကိုမီးကင်ခိုင်းလိုက်တယ်။
ပြောရရင် အရူးရဲ့ ကြားဖူးနားဝတွေလို့ထင်တာပဲ။
ဒီအရူးက အနည်းအကျင်းတော့ သေသပ်ပြီး အတော်အသင့်ကို ပါးနပ်တယ်။
အရူးက တစ်ခါလာ တစ်မျိုး ပြောနေကျအတိုင်း
သူအတင့်တယ်အခမ်းနားဆုံးထင်တဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ သူရဲ့နာမအသစ်ကို မပီမသကြီး အော်ဟစ်တယ်။
အရူးက သူ့ ပါးစပ်ဆိုင်းနဲ့သူ ကွေးနေအောင် ထ က လိုက်ပြန်တယ်။
တစ်ဆိုင်လုံး အသက်အောင့်ထားမိတယ် ။ ဖွင့်လက်စသီချင်းတွေ ရပ်ပေးထားရတယ် ။
ပြောလက်စ စကားတွေကို လွှတ်ချထားကြတယ်။
အားလုံးဟာ ... အရူးရဲ့အရိပ်အခြေကို မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေကြတယ်။
ခေါင်းခါတယ် ။ ခေါင်းညိတ်တယ် ။ နောက် ခေါင်းထပ်ခါတယ် ။ နောက်ထပ် ခေါင်းညိတ်တယ် ။
အရူးက အာဆင်နယ်မှာ နည်းပြလုပ်မယ့်အကြောင်းပြောတယ်။
အိုစမာကို လက်ရဖမ်းပေးမယ့် အကြောင်းပြောတယ်။
ဆတ်ကနဲ. . . . . အရူးမတ်တတ်ထရပ်တယ်။
အရေးတကြီးကိစ္စကို သတိရလိုက်သလိုဟန်ပန်နဲ့ လက်ညှိူးတစ်ချောင်းထောင်လိုက်တယ် ။ မျက်မှောင်နက်နက်ကြုတ်ထားတယ် ။
စားပွဲကို “ဖျမ်းကနဲ“ ပုတ်လိုက်ပြီး
ဟေ့ .. ငါပြန်လာခဲ့မယ်. . . .။ ၂၆နာရီထိုးရင် ငါပြန်လာခဲ့မယ်။
(အရူးက အသံတော့ အောင်ရှာတယ်)
ပြောပြောဆိုဆို.. တဟုန်ထိုး ပြေးထွက်သွားပါရော. . . . . . . . ။ ။
မှတ်သား ချဲ့ကား ကျန်ရစ်ကြ ။ အငြင်းပွား အချင်းများ ကျန်ရစ်ကြ ။
အရူးရဲ့ နာမည်အသစ်အကြောင်း။ အားလုံးကိုစောင့်ခိုင်းလိုက်တဲ့အကြောင်း။
အရူး မျက်ထောင့်နီနေကြောင်း။ လက်ညှိူးတစ်ချောင်း ထောင်သွားကြောင်း။
အရူး ပြန်လာဦးမယ့်အကြောင်း ။ ယုတ်စွအဆုံး အရူးလည်ပင်းက ရောင်စုံဖိနပ်စုတ်တွေအကြာင်း။
အဲ သ လို မျိူး . . . .
အရူး တွင်ကျယ်သွားလိုက်တာ. . . တစ်ဆိုင်လုံးကို သွက်သွက်ခါ
မျက်စောင်းထိုးချင်ကြ ။ ။
( Face (မုခ)မဂ္ဂဇင်း)
ခြေဆော့ လက်ဆော့ နား
အကောင်လိုက်ပြနေတာတောင် အရိပ်ကို မဖမ်းမိနိုင်ဘူး
ငါ့နားက ကြားနေကျ သတင်းထဲ ချော်ကျတယ်..။ ။
ကဗျာတွေ စာတွေ သေသေချာချာ မရေးဖြစ်တာကြာပါပြီ။ ၀တ္ထုလေးတွေ ရေးမယ်ပျိုးထားတာလည်း တစ်လုံးမှချမရေးဖြစ်ဘဲ အလုပ်တွေများနေတာလိုလို ၊နေမကောင်းတာလိုလို၊ ကွန်ပြူတာပျက်တာလိုလိုနဲ့
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆင်ခြေပေးပြီး ပေကပ်နေခဲ့မိပါတယ်..။
အော်တဲ့သူတွေလည်း အော်နေကြပြီမို့ အခုချရေးမိလိုက်တဲ့ကဗျာကို အခုပဲတင်လိုက်ပါတယ်. ကဗျာပူပူနွေးနွေးဆိုပါတော့..း)
အာရုံကို မီးမှိတ်ချိန်အထိ အိပ်မွေ့မချနိုင်ခဲ့...
အရုပ်ကိုကြိုးဖြတ်ထားသလို ခန္ဓာက လဲလျောင်းငြိမ်သက်
ကဗျာငြိမ်းနေတော့ အခန်းက ပိုပြီး မဲမှောင်လို့
တဂျစ်ဂျစ် မှန်ပြတင်းကို ကုတ်ခြစ်ရိုက်ပုတ်ကြ
လေထုထဲ အိမ်လွမ်းနာတွေ ဓါတ်ဖွဲ့ပေါင်းစည်း....
"အ သက် ရှု ရ တာ မ ၀ ဘူး "
အမှောင်ထဲ အလင်းပေါက်တွေ ကျဲတောက်လာပြီလား
ဖျတ်ကနဲ တစ်ရက်စာအိုမင်းသွားတဲ့ မျက်နှာကျ
ဖျတ်ကနဲ တစ်ရက်စာနှုတ်ယူသွားတဲ့ အသက်ဓါတ်တရား
အတောင်ကို ရုတ်တရက် ရုပ် ကြည့်ချင်လာတယ်...
ရှေ့စိတ်ကို နောက်စိတ်က လိုက်လိုက်သိယုံတဲ့
အရုဏ်ကျင်းတာတောင် အသိတွေ မလင်းနိုင်သေးဘူး.
ဒီကနေ့ စီးတဲ့ ဖိနပ်ခေါ်ရာအတိုင်း..
ဘ၀ကို ဒုန်း စိုင်း ထွက်ခဲ့မိပြန်ပြီ..။
(ကာတွန်းပုံလေးက ဆရာပိုပို ကောက်ခြစ်ပေးခဲ့တာလေးပါ.။)
ဘလော့နှစ်နှစ်ပြည့် ရသစာအုပ်စင်နဲ့ နိုဝင်ဘာအပျော်အရ...